﻿Komputermen စာမျက်နှာ 478
<< 475 476 477 478 479 480 481 >>
ပြင်ပ disk ကို connection ကို cable ကို3မီတာ
အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ် VZHD 3.
ဘယ်လိုမတက်ဘလက် mode ကို (စဉ်ဆက်) က Windows 10
တစ်ခုမှာမှတ်ချက် ကိုလည်းစဉ်ဆက် mode ကိုလူသိများတက်ဘလက် mode ကို - ဒါကျယ်ကျယ်လောင်လောင်စက်တင်ဘာလကုန်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်မှာ operating system ကိုနောက်ထပ်ပထမဦးဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာတည်ဆောက်၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းက Microsoft ကမိန့်ထားတဲ့ Windows 10 ကိုတက္ကသိုလ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ mode သေးငယ်တဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်အတူ devices များအသုံးပြုသူများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တက်ဘလက် mode မှာ, စနစ်ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့်အတိုကောက် minimization ထိန်းချုပ်မှုမှလျှောက်လွှာပြတင်းပေါက်ဖော်ပြရန်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအဖြစ် interface ကို, ကို switch ။ မျက်နှာပြင်အပြည့်နဲ့ Start Menu ကိုသတ်မှတ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအတွက် Tablet ကို mode ကိုစနစ် pre-testing ကိုအစီအစဉ်အတွင်းက Windows 10 အတွင်းကို Preview ၏တည်ဆောက်ချက်ချင်းပေါ်လာဘူး။ သူကတခြားသူတွေကိုအကြား, အဖြတ်လမ်းရွေးချယ်စရာ button ကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်ဘယ်မှာခြင်း, အကြောင်းကြားစာဘားအလယ်ဗဟိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့, ဇန်နဝါရီလပရိသစနစ်တွင် Windows ကို 10 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအတွက်အခြေခံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သောယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ပေးအပ်စနစ်၏အဓိကချစ်ပ်သိသိသာသာပြုပြင်ထားသောဗားရှင်း, တစျခုဖွစျလာခဲ့သ တက်ဘလက် mode သို့တစ်ဦးက desktop interface ကို display ကို mode ကိုမှ switching ။ တက်ဘလက် mode ကို၏ activati​​on ၏တူညီသောယန္တရားက Windows 10 ၏နောက်ဆုံးပေါ်အရာရှိတဦးကဗားရှင်းအတွက်ယခုသုံးခြင်းနှင့်သည် အဟိုက်ဘရစ်ကီးဘုတ် dock ကနေအဆက်ပြတ်သောအခါ ပုံမှန်အားဖြင့်, တက်ဘလက်ပစ္စည်းတွေစဉ်ဆက်ကိုယ်တိုင်ကအတွက် activate ။ device ကိုမှ docking ဘူတာရုံနောက်တဖန်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်သောအခါ, တက်ဘလက် mode ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာထိုစနစ်၏ desktop ပေါ်မှာ interface ကိုပြန်, ကို turn off ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တက်ဘလက် mode ကိုကသေးငယ်တဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်အတူအားလုံးပစ္စည်းတွေအပေါ်က Windows 10 ကိုသုံးပါကအဆင်ပြေပါစေဖို့ကြိုးစားနေရည်ရွယ်သည်ပထမဦးဆုံးရာဌာန၌ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထုတ်ကုန်များ၏ prerogative မဟုတ်ပါဘူး အထူးသဖြင့်, ဒီသမားရိုးကျသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားမှတ်စုစာအုပ်သက်ဆိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်တက်ဘလက် mode ကိုကူးပြောင်းအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကတစ်ဦးတည်းသာဖန်သ​​ားပြင်ကဲ့သို့မည်သည့် device ကိုအပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာနေတဲ့ဒုတိယမော်နီတာသို့မဟုတ်တီဗီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုမှ - - အများအပြားဖန်သားပြင်နှင့်အတူ Tablet ကို mode ကို အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ "စနစ်" ပုဒ်မခွဲအသီးသီး, "တက်ဘလက် mode ကို" - တက်ဘလက် mode ကို setting တွင်ရှိနိုင်ပါသည်, သူတို့တစ်တွေပုံမှန်လျှောက်လွှာ "Settings" ကို၌ရှိကြ၏ touchscreen က device များအတွက်အပိုဆောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များပါဝင်စေပါ။ ဤတွင်, တက်ဘလက် mode မှာ, settings ကိုသငျသညျ, အထူးသဖြင့်၎င်း၏အပြုအမူညှိနိုင်သူထိတွေ့ထုတ်ကုန်များအတွက်သူ့ဟာသူအလိုအလျောက်အတွက် activate အခါ, မှာအားလုံးပိတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသူထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့ဒီ mode ကို activate လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထား။ တစ်လောကလုံးနဲ့ Desktop နှစ်ဦးစလုံး software ကို - စဉ်ဆက် mode ကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖို့အားလုံးကို applications တွေကို window ကိုရွေးချယ်စရာကျစ်လစ်သိပ်သည်း size ကိုခေါက်မပါဘဲတပ်ဖြန့်ကြသည်။ ကို full screen mode ၌၎င်း, စနစ်စပယ်ယာကို run ပါ။ သင်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပိတ်ပစ်တွေ့လိမ့်မည်ညာဘက်ထိပ်ထောင့်မှ pointer ကိုရွှေ့ရသောအခါလျှောက်လွှာအတွက်အကျွမ်းတဝင်ခလုတ်ခေါက်ပြတင်းပေါက်, တက်ဘလက် mode မှာ hidden နေကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, တက်ဘလက် mode ကို settings ကိုအ taskbar icon ကို disable လုပ်ဖို့ပါဝင်သည်။ Windows အ taskbar ခလုတ်၌ဤ mode ကိုပြောင်းပြီးနောက်ကိုသာရှာဖွေနေခြင်းနှင့်တာဝန်များကို (Task ကိုကြည့်ရန်) သတင်းပို့ကြသည်။ သို့သော်သင်သည်အလျင်အမြန်ယခင်ကဖွင့်လျှောက်လွှာကိုပြန်သွားဖို့ခွင့်ပြုရာ, လက်ဝဲတစ်ဦးမြှား၏ပုံစံအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုခလုတ် "နောက်သို့" ကထပ်ပြောသည်။ ဒီ alignment ကိုမတော်တဆဖွင့်လှစ်မလိုချင်တဲ့ပြတင်းပေါက်တားဆီးလိမ့်မည်။ အမူအရာလုပ်ထိဖန်သားပြင်နှင့်အတူကိရိယာများပေါ်တွင် applications များစီမံခန့်ခွဲရန်, သငျသညျလညျးတင်ဆက်မှုခလုတ်ကိုတာဝန်များကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်အားလုံးပြေး applications တွေကိုတစ်ဦး preview ကိုရလိ​​မ့်မည်။ ဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းများအမြင်တွင်, သငျသညျ mouse ကိုဘီးနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုမဆိုသို့မဟုတ်နီးစပ်အသုံးမပြုတဲ့ applications တွေကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်။ Close ကိုအသုံးမပြုတဲ့ applications များကသူ့ box ရဲ့အပေါ်ဆုံးသင့်ရဲ့လက်ချောင်းသို့မဟုတ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် pinch, ပြီးတော့ Windows 8.
ငါဘယ်လို Skype ကို
ဝန်ဆောင်မှု Skype ကိုအကွာအဝေးမှာလူအကြားဆက်သွယ်ရေး၏အဓိက tools တွေကိုတဦးဖြစ်လာသည်။ Excellent ကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို, အခမဲ့လောကရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုဖို့ခေါ်ဆိုခ, အင်တာဖေ့၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အများကြီးပိုလုပ်နိုင်စွမ်း - တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အကြောင်းပြချက်ညျ့စုံ၏။ သင်တို့မူကားအချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ဘယ်လောက် Skype ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ပါတယ်။ Clear Private Data လုံးဝသင့်အကောင့်မဖွစျနိုငျ delete - ထိုကဲ့သို့သော function ကိုရိုးရှင်းစွာတည်ရှိနေမပေးပါဘူး။ ဒီအသုံးပြုသူအဆင်ပြေနှင့်လုံခြုံမှုအဘို့ပြုလျက်ရှိသည်။ ထိုကွောငျ့, လုပ်ဖို့ရှိနေဆဲသောသူအပေါင်းတို့သည် - သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောင်းလဲနဲ့ အစဉ်အမြဲအဟောင်းအကောင့်အကြောင်းမေ့လျော့။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအကြောင်းရှိသမျှကိုမလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ Win + R.
AMD ၏ Far Cry 3
အထုပ် Nvidia GeForce 310,64 Beta ကို, AMD ရဲ့အသစ်ယာဉ်မောင်းအထုပ် Catalyst 21,11 Beta ကို 11 သတင်းများအရ, 8xMSAA နှင့် SSAO စွမ်းဆောင်ရည်တိုးနှင့်အတူ resolution ကို 1600p ငှါ, AMD ၏ Catalyst 12,11 CAP2 နှင့် တွဲဖက်.
လွ power supply
သငျသညျ XP ကို​​ reinstall အခါ, မင်္ဂလာပါ, ငါသည်သခင်အကြောင်းရင်း diode ကိုပြောင်းလဲတွေ့အာဏာကိုပေးဝေရေးကိုမီးရှို့ကြ၏။ Computer ကို (အရေးယူမှုမရှိဘဲ power supply ကိုစမ်းသပ်ဖို့ BIOS ကို 10-15 မိနစ်၌ရှိ၏) ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ယာဉ်မောင်းနောက်တဖန်ကိုမီးရှို့နေတဲ့ဝန် power supply မှာ 5-7 မိနစ်စနစ်ကို install အခါ။ အကြောင်းရင်းဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့ခုနှစ်တွင်ပိုလက်ရှိလျှင်, ဤလုပ်ရပ်မှာကိုလောင်သည်နှင့်ချိတ်ဆက် hard drive ကိုနှင့်ဤပျက်စီးမှုမှ power supply တနျဌာနခှဲအပေါ်တစ်ဦး CD ကိုဖြစ်စေအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြန်လည်ရှေ့တော်၌အပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်၏ပြန်ကြားချက်များအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Router က TP Link ကို TL WR842ND
router များကိုအများဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်စဉ်တူဇာတ်လမ်းအပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာ:အသစ်တစ်ခုဆက်သွယ်မှု, တစ်ဦး wireless network ကို၏ installation ကိုဖန်တီးရန် device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့မော်ဒယ်များ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းအချို့ features တွေကိုအမြဲရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ဦး Router က TP-Link ကို TL-WR842ND configure ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှု။ Device ကိုကော်နက်ရှင် ကွန်ပျူတာနှင့် Router က connection ကိုတစ်ဦးဂန္အမှု၌ဖန်ဆင်းထားသည်:သင်တစ်ဦးသည် router Netgear N150 configure ဖို့ဘယ်လိုသိလျှင်သင် cable ကို install လုပ်ချင်ဘယ်မှာ, ထို့နောက်မရှိပြဿနာများကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူများအဘို့, ကွန်ပျူတာထဲမှာ router ကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှငျ့ရငျဆိုငျကိုပထမဦးဆုံးအချိန်, ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတ်မိကြကုန်အံ့: Router ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း Router ကို၏ WAN ဆိပ်ကမ်းသို့သင့်ရဲ့ကေဘယ်လ်ပေါ်မှာပါ။ ကွန်ပျူတာအတွက်ကွန်ယက်ကတ်ကိုအပေါ်ရေတို cable ကို Router က LAN port နှင့် connector ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ကွန်ရက်မှ router ကို Turn နှင့်ကွန်ပျူတာကိုစတင်ပါ။ ကွန်ယက်အဒက်၏ setting စစျဆေးဖို့သေချာပါစေ:ဒေတာချိတ်ဆက်ရန်အားလုံးလိုအပ်သောအလိုအလျှောက် mode ကို အ setup ကိုမီနူးမှ Access ကို Router ကို၏ menu ကို Setting ကိုသို့အရတစ်ဦးဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် 192.
Windows XP ကို​​
အများကြီး "ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစံချိန်" သင်၏ကွန်ပျူတာ, ဒါကြောင့်ဒီ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြောင်းဟာအလွန်အသုံးဝင်သော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် "margin:5px 5px 5px 2px;
<<      475   476   477   478   479   480   481       >>